OneDrive yakagadziridzwa ichipa rutsigiro rweGIF mafaera | IPhone nhau
Microsoft yekuchengetera gore rekushandisa, zvishoma nezvishoma, rave sarudzo chaiyo kune vazhinji vashandisi avo vanonyanya kushandisa Dropbox, kunyanya nekuda kwenzvimbo huru yekuchengetera iyo yavanopa pavanongovhura account. Asi zvakare kusangana kwakazara neOfisi 365 uye Hofisi maficha anowanikwa pane ese masisitimu, riite iro rakanakira kunyorera kumamirioni mazhinji evashandisi vanoshandisa Microsoft hofisi suite. Ivo vakomana vanobva kuRedmond, kure nekusiya iyo yekuchengetera application, ramba uchishanda pairi uchiwedzera mabasa matsva kuti utarisise chero mhando refaira nyore.
Iyo yazvino OneDrive inogadziridza pakupedzisira inotipa kuwiriraniswa neanopenga maGIF mafaera, kuti isu tigone kuzokwanisa kuita mashandiro navo, varatidze nekukurumidza panzvimbo pekuratidzira iyo inomira mufananidzo izvo zvakatiratidza kusvika zvino. Uye zvakare, iyi nyowani nyowani inotibvumidza kuti tikurumidze kuchinjisa maakaunzi mumasekondi mashoma. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kumanikidza nekubata pazita Rangu rekushandisa, kuitira kuti maakaundi ese atakamboshandisa pamwe nekushandisa aratidzwe.
Microsoft yakatora mukana wekuburitswa kwesarudzo iyi, iyo yakaverengerwa 8.8.9, ku gadzirisa zvikanganiso zvatinokuratidza pazasi:
Kukanganisa kwakonzera kuti vamwe vashandisi vatadze kuona zviono zvacho zvakananga mukushandisa.
Bvisa chikanganiso chakaitika kana uchiedza kuvhura faira rePDF mune SharePoint Server account.
Microsoft yakagara ichizivikanwa, zvirinani munguva pfupi yadarika, ne teerera kune vashandisi vezvishandiso zvako, vashandisi vanoramba vachikurudzira kuvandudzwa kana shanduko mukushandisa kwekambani izvo zvisina chekuita neOfisi, nekuti, ngatizvitarisei, zvakaoma zvikuru kuwana basa risingabvumirwe nezvimwe zvekushandisa muhofisi yeMicrosoft hofisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » OneDrive yakagadziridzwa ichipa rutsigiro rweGIF mafaera
Nei maApple Ads Achibudirira Zvakadai?